Apawad: नहेपिने को होला?
Useful links about Dolakha
अब फर्कौं !:
पोखराको फेवाताल किनारमा सुर्यास्तमा आफ्नो बासमा फर्कंदै चराहरु
रस चुस्दै माहुरी, दोलखामा माहुरीपालन खस्कँदो छ ।
ह ह तारे ह ह...
प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको परम्परागत दाँई गरिँदै
देशको आशाको केन्द्र
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको गोगरको सुरुङ्ग
हलुवामा बालुवा !
गुलाफको फुलमा रमाइरहेको किरा
मै, छोरी सुन्दरी....!
दोलखाको लामावगर गाविसमा पानी ओसार्दै बालिका
आहा ! कत्ति राम्रो
दोलखाको छ्योतछ्योतबाट देखिएको गौरिशंकर हिमाल
लाग्दछ मलाई रमाईलो !
कालीञ्चोक जाँदा देउरालीनिरको संरचना ©सन्तोष बोहोरा
... गाईबस्तु चराँउदै
पशु विकास फर्म जिरीका गाई चरनमा
खियाँईदैछ दिन प्रतिदिन
यो तस्विर र देशको हालत कतै मिल्छ कि !
नहेपिने को होला?
विषय प्रवेश केहि समयअघिको सानो घटनाबाट। माईतीघरमा कोटेश्वरतिर जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस चढ्यौं। बसमा तिलको दानासम्म अटाउने ठाँउ समेत थिएन। नयाँ बानेश्वरबाट केहि मानिसहरु चढे, केहि ओर्लिए। मिनभवन पुगेपछि बसको कर्मचारीले यात्रुहरु मिलाउन लाग्यो। यात्री र कर्मचारीबीच भनाभन भएको सुनियो। कारण बुझ्दा थाहा भो पछाडी जानुस भन्दा विवाद भएको रहेछ। गाडीको अवस्था हेर्दा विवाद गर्नुपर्ने देखिन्नथ्यो। झगडा छेउबाट हेरेका साथीले भने विवाद गर्ने यात्रुलाई दुर्व्यवहार भएको त थिएन। उसले पछाडी गइदिनुस न भन्ने कर्मचारीको आग्रहलाई दुर्व्यवहार ठान्यो। उसलाई मनमा त्यस्तै अनुभूति भएका कारण यो अवस्था आएको हो।
साथीको कुरामा दम छ भन्ने लागेर नै यो लेख लेख्ने जाँगर चलेको हो। समाज विस्तारै धुर्विकृत भैरहेछ। राज्यबाटै विभिन्न समुदायहरु हेपिए। एकथरीको तर्क। अर्कोथरी भन्छन हेपिएको छैन। हेपिएकै हो वा हैन भन्ने बारे सर्वमान्य मापक हालसम्म नभेटिएका कारण यसै भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन । मौकामा आफ्नो विचार नराखेर बेमौकामा कथा हाल्नुको अर्थ छैन नै। त्यसैकारण पनि यो लेख लेख्ने जमर्को गरिएको हो।
शैशव अवस्थामा अभिभावकले भनेका कथाझैं अहिले धेरै वर्ग, समुदायका मनमा बसका यात्रीको झैं अनुभुति भैरहको अवस्था छ। नेपालमा अहिले धेरै बहसमा हेपिन्छौं मात्रै भन्ने सुनिएका कारण पनि केहि वर्ग, समुदायका मानिसका मनमा त्यसलो गहिरोसँग घर गरि नै सकेको छ। यो उत्ताउलिएको बहसले हामीलाई स्वस्थ बहसबाट वञ्चित गरेको छ। साथै अनावश्यक रुपमा शंकालु तथा हिनताबोधी बनाउँदै लगेको छ।
अहिलेको नेपालमा अधिकांश वर्ग तथा समुदायलाई हामी हेपियौं भन्ने लागेको छ। नेपाली भन्दा फरक भाषा बोल्नहरुलाई नेपाली भाषा मातृभाषा भएकाहरुले हेपेको भन्ने लाग्छ। काठमाण्डौ बाहिरकाहरुलाई काठमाण्डौले हेप्यो भन्ने लाग्छ। मधेसका वासिन्दालाई पहाडले हेपेको भन्ने लाग्छ। पुर्वकालाई पश्चिमकाले। पश्चीमकालाई पुर्वकाले। यसरी लिष्ट बनाउँदै जाने हो भने यो लामै लिष्ट बन्न सक्छ। यसका लागि पछिल्लो समयमा भएका बहसहरुले निकै ठूलो योगदान गरेका छन्। अझ यहि विषयलाई देखाएर धेरैको पेट भर्ने धन्दा पनि चलिरहेको हुँदा मुद्धा दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ।
अधिकांशलाई लाग्छ यो देशमा बाहुनहरुले हेपिनु पर्दैन। बाहुनहरु उच्च जातमा पर्ने भएका कारण पनि यस्तो सोचिएको हुन सक्छ। सम्भवत सबैलाई थिचोमिचो गर्ने हेप्ने भन्ने आशय झल्कने गरि प्रयोग गरिएको शब्द वाहुनवादले पनि त्यही अर्थ दिन्छ। आजकाल के कारण हो यो शब्दको प्रयोग पहिलेजत्तिकै र पहिलेझैं प्रयोग हुन छाडेको छ। एक जमानामा वाहुन भएर जन्मनेहरु जन्मजात शोषक हुन्। राज्यका सबै श्रोतमा अधिकार जमाएर बसेका कुलिन वर्ग हुन्। श्रममा विश्वास नगर्ने वर्ग हुन्। अर्कालाई शोषण गरेर जीवीका धान्नेहरु हुन् भन्ने बुझाई थियो । अझै पनि केहिमा त्यो बुझाई यद्यपी छँदैछ।
नेपाल विविधता भएको मुलुक हो। एक भूगोलमा धेरै जातजाती, भाषा, धर्म लगायतका मानिसहरु यहाँ वर्षौंअघिदेखि बस्दै आईरहेका छन्। यसरी बसोबास गर्ने क्रममा जातविशेषमा रहेका विभिन्न विश्वास र प्रचलनहरुले गर्दा नेपालमा सबैको एकैखालको र एकानासको विकास नभएकै हो। नेपालको पहिलो कानुनी दस्तावेजहरु हिन्दु धर्मबाट प्रभावितै भएकै हुन्। पुरानो समयमा शासकहरुले हिन्दु धर्ममा आधारित भएर राज्य सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। तर पनि १९१० मा लागु भएको मुलुकी ऐनमा हिन्दु समाजमा वर्जित मानिएका भाउजु व्यहोर्ने लगायतका चलन पनि केहि समुदायका लागि छुट गरिएको थियो। हुन त त्यसमा मान्छे जिउँदै जलाउने सति प्रथालाई पनि मान्यता दिइएको थियो। हामी त्यो समयबाट अहिले धेरै अगाडी आइसकेको छौं। यतै अलमलिएर बस्ने हो भने विगत कोट्याएरै बस्न सकिन्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको अगाडी जाने हो।
नेपाली समाजमा विभेद नभोग्ने सायदै होलान। मात्रै त्यसलाई अनुभुती गरियो वा गरिएन भन्ने मात्रै सवाल हो। यदि मनमा विभेद हुँदैछ भन्ने कुरा लाग्यो भने हामीले सकरात्मक रुपमा गरिएका व्यवहारलाई पनि विभेद भनेर शंका गर्न लाग्छौं र सो अनुसार व्यवहार गर्ने गर्छौं। मैले धेरै ठाँउमा त्यस्ता घटनाहरु देखेको छु। कुनै ठाँउमा सकरात्मक गर्न खोज्दा पनि समस्या देखिएको छ। कतै कतै विभेद हुँदा पनि त्यसलाई वास्ता नै नगर्नेहरु पनि छन्।
अन्तमा आफ्नै अनुभूति। सानैदेखि टोपी लगाउने बानी नै हो। टोपी लगाएर विद्यालय जाँदा माथिल्लो कक्षाकाले फाल्नेदेखि कक्षामा शिक्षकले डस्टर पनि धेरै पटक बनाएका छन्। बसमा हिँड्दा टोपी लगाएकै कारण बसका कर्मचारीहरुको दुर्व्यवहार पनि सहेको छु। सँगैका साथीले ५ रुपैंया छैन भन्दा चुप लाग्ने कर्मचारीले मलाई पुरै भाडा नहुँदा बीचैमा झारिदिने भनेर लछारपछार गर्थ्यो। सरकारी कार्यालयहरुमा टोपी लगाएकै कारण रुखो व्यवहारको सामना गरेको छु। अवस्था अझैसम्म यहि हो। अझै पनि एकथरीले टोपी लगाउनेहरु विशिष्ट हुन्छन्। उनिहरुलाई राज्यले समाजले विशिष्ट व्यवहार गरेको छ भनेर समाजमा अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्। लगाउनेहरु उच्च खानदान र पहुँचवाला भए बेग्लै कुरा। आम रुपमा भोगिने समस्या यस्तै यस्तै हुन्।
विभेद नेपालमा सबै क्षेत्र वर्ग समुदायमा व्याप्त छ। त्यसको मात्रा भने समय परिस्थितीका आधारमा धेरै वा थोरै हुन सक्छ। विभेद भोग्ने भन्दा पनि त्यो हुन्छ भन्ने बुझाई धेरै घातक छ। भोगेका भोगाईहरु समयकालमा विर्सन सकिन्छ। मनमा गढेको कुरा भने विर्सन पनि धेरै समय लाग्छ। सबैले सबैको सम्मान गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नका लागि सुरुवात गर्न ढिलो भैसकेन र!
Posted by Arjun Apawad at 2/04/2017 11:56:00 PM
सामाग्री बारे फेसबुकमा प्रतिक्रिया लेख्नुहोस ......
हाम्रो फेसबुक पाना
कालीञ्चोक एफ एम
शैलुङ्ग एफ एम
हाम्रो रेडियो एफ एम
तिथीमिति रुपान्तरण गर्न
प्रीती फन्टलाई युनिकोडमा लान
चैत्र २७ गते मिर्गे ५ चिलाउनेखर्ककी छलिमाया दाहाल जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा निन्याउरो अनुहार लिएर बसिरहेकी थिईन । उनी जिल्ला प्रशासन आउनु...
सुन सिद्धार्थ !
-केशवराज चौलागाई मान्छे नमर्दै जन्मीएछौ र पो बुद्ध भयौ अहिले जन्मिएका भए तिमी बुद्धु हुने थियौ तिम्रो युगमा शान्ति त्याग तपश्या...
माथिल्लो तामाकोसी राजनीति
दिल सागर माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना देशको सबैभन्दा ठूलो निर्माणाधिन आयोजना हो । स्वदेशी पूँजीमा निर्माणाधिन आयोजना अहिलेसम्म...
प्रभु, तपाँइको शिक्षा यहि हो त ?
अर्जुन अपवाद मैले पाएको ज्ञान गलत हैन भने क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिजस हुन । उनलाई तत्कालिन समयमा मानिंदै आएको संस्कारका विरुद्ध बो...
क्यामेरामा एमाओवादी चुनाबी सभा
ल आयो : हेलिकप्टर अवतरण हुने बेलामा
महानता के ले नाप्छ आमा ?
अर्जुन अपवाद मैले अघिल्लो दिनमा नै भेट्न आउने खवर गर्न खोजेको थिएँ । फोनमा कुरा भन्दा वढि क्यार क्यार सुनिएको थियो । कुरा बुझियो की बुझ...
HIMALAYAS: Symbol of Sanctity and Diversity
Praticipatory Rural Development Program
दोलखे विष्णुका अभिव्यक्तिहरु ...
<<<ब्लगबारे प्रतिक्रिया लेख्न >>>
तपाइले apawad@hotmail.com वा np.prdp.admin1@blogger.com मा मेल गर्न सक्नुहुन्छ |
अभिलेखालय May 2018 (2) Feb 2018 (1) Jan 2018 (2) Dec 2017 (4) Oct 2017 (1) Jul 2017 (2) Feb 2017 (2) Jan 2017 (2) Dec 2016 (1) Nov 2016 (1) Sep 2016 (1) Aug 2016 (2) Jul 2016 (1) Apr 2016 (2) Mar 2016 (1) Feb 2016 (2) Jan 2016 (1) Dec 2015 (1) Nov 2015 (1) Oct 2015 (3) Sep 2015 (1) Aug 2015 (2) Jul 2015 (2) Jun 2015 (4) May 2015 (5) Apr 2015 (1) Mar 2015 (9) Feb 2015 (1) Jan 2015 (6) Dec 2014 (4) Nov 2014 (4) Oct 2014 (2) Sep 2014 (2) Aug 2014 (4) Jul 2014 (6) Jun 2014 (2) May 2014 (4) Apr 2014 (5) Mar 2014 (1) Feb 2014 (5) Jan 2014 (5) Dec 2013 (3) Nov 2013 (6) Oct 2013 (10) Sep 2013 (4) Aug 2013 (7) Jul 2013 (10) Jun 2013 (11) May 2013 (12) Apr 2013 (8) Mar 2013 (7) Feb 2013 (1) Jan 2013 (3) Dec 2012 (6) Nov 2012 (5) Oct 2012 (5) Sep 2012 (5) Aug 2012 (5) Jul 2012 (7) Jun 2012 (6) May 2012 (4) Apr 2012 (5) Mar 2012 (6) Feb 2012 (9) Jan 2012 (4) Dec 2011 (4) Nov 2011 (5) Oct 2011 (4) Sep 2011 (3) Aug 2011 (4) Jul 2011 (4) Jun 2011 (4) May 2011 (5) Apr 2011 (7) Mar 2011 (5) Feb 2011 (4) Jan 2011 (6) Jul 2010 (2)
पोस्टहरु इमेलमा प्राप्त गर्न
copyright ©apawad 2013. All rights reserved.